काठमाडौं, ३० साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति जतिजति नजिक हुँदैछ– यसको चर्चा विश्वव्यापी बढ्दै गइरहेको छ । यसपटकको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन चासो र चर्चाको शिखरमा हुनुका फरक आयामहरु छन् ।
पहिलो कुरा– यो निर्वाचन कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको बीचमा हुँदैछ । अमेरिका कोरोना भाइरसले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएको देश बनेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ करिब ५५ लाख संक्रमित छन् भने करिब १७० हजारको मृत्यु भइसकेको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महामारीलाई देखाएर निर्वाचन केही समय सार्ने मनसाय नदेखाएका हैनन् । तर, यदि ठूलो महामारी र क्षतिको बीच पनि कसैले चुनाव सार्न चाहेन । यहाँसम्म कि राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले नै उनको मनसायलाई साथ दिएन । यसले कुनै पनि मूल्यमा लोकतन्त्रप्रति सम्झौता नगर्ने अमेरिकी मनोविज्ञानलाई प्रष्ट गर्दछ ।
दोस्रो– कोरानाले गम्भीर आर्थिक संकट सृजना गरेको छ । अमेरिकामा कोरोना संंक्रमण तीव्र भए यताको ३ महिनामा करिब ४० लाखले बेरोजगारी भत्ता दाबी गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापना यताकै सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी समस्या उत्पन्न भएको बेला यो चुनाव हुँदैछ । यस्तो बेला अमेरिकी मतदाताको मनोविज्ञान भोटमा कसरी अभिव्यक्ति हुन्छ, त्यो सबैको चासोको बिषय छ ।
तेस्रो– सन् २०१६ को निर्वाचनमा ट्रम्पले ‘मेक अमेरिका ग्रेट एगेन’को नारा दिएका थिए । अब्राहम लिंकनजस्ता नेताहरुले स्थापना गरेको कुनै समयको क्रान्तिकारी रिपब्किन पार्टी सन् १९८० यता निरन्तर दक्षिणपन्थी हुँदै गएको थियो । ट्रम्पको उदय त्यही दक्षिणपन्थ पराकाष्ठा मानिएको थियो । ट्रम्पले रेगन, बुसजस्ता आफ्नो पूर्ववर्ती रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले शुरुवात गरेको आर्थिक उदारीकरण, उदार आप्रवासन नीति र वित्तिय भूमण्डलीकरणलाई समेत चुनौति दिँदै नश्लीय गोरा राष्ट्रवादको पैरवी गरेको विश्लेषकहरुको ठहर रहँदै आएको छ ।
ट्रम्पको ४ वर्षे कार्यकाललाई असफल, लोकरिज्याइँवादी, डेमागग र अनुदार शासनकालको रुपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । अश्वेत, हिस्पानिक, मुस्लिम र अन्य आप्रवासीहरुले ट्रम्पका नीति र अभिव्यक्तिबाट मनोवैज्ञानिक पीडा र चुनौति समाना गरिरहेको बताइन्छ । यी विश्लेषण निर्वाचन परिणाममा अभिव्यक्ति हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने बुझ्न समेत यो निर्वाचनको महत्व छ ।
चौथो– अमेरिका यतिखेर नयाँ शीतयुद्धमा छ । सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनपछि शीतयुद्ध समाप्त भएको ठानिएको थियो । त्यस यताको करिब २५ वर्ष अमेरिकी प्रभुत्व विश्वमा एकछत्र रह्यो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा चीनसँगको व्यापार युद्ध चर्केर गयो । रुससँगको प्रतिस्पर्धा पनि बढेर गयो । इराकमाथि हाक्काहाकी आक्रमण गर्ने देश सिरिया युद्धलाई कुनै परिणाममा पुर्‍याउन नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । अहिले अमेरिका चीनसँग नयाँ शीतयुद्धमा संलग्न छ । राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका विदेशमन्त्री माइक पम्पिओ चीनलाई दैनिक गाली गरिरहेका हुन्छन् । अमेरिकी मतदाताले यो स्थितिलाई कसरी लिन्छन्, यो प्रश्न समेत आगामी निर्वाचनका सम्परिक्षण हुुनेछ ।
पाँचौं– अमेरिकी निर्वाचनको इतिहासमा केही अपवाद बाहेक दोस्रो कार्यकालका लागि बहालवाला राष्ट्रपति पराजित भएको इतिहास छैन । धेरैको विश्लेषण छ कि यसपाली ट्रम्प र माइक पेन्सको जोेडी हार्न सक्दछ । आखिर के हुन्छ ? अमेरिकी मतदाताले परम्परा कायम राख्दै ट्रम्पलाई जिताउँछन् ? कि ट्रम्प हार्छन् ?
यी ५ वटै प्रश्नले आगामी अमेरिकी निर्वाचन रोचक बन्ने देखिन्छ ।
उपराष्ट्रपति पदकी उम्मेदवार कमलादेवी ह्यारिस
अमेरिकामा ग्रिन, सोसलिष्ट र लिवरिटायिन पार्टीले समेत राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेद्वार दिने गरेका छन । गत निर्वाचनमा करिब ४५ लाख भोटसहित लिवरिटारियन उम्मेद्वार गेरी जोहन्सन तेस्रो भएका थिए ।
तर, निर्वाचक मण्डलमा आधारित निर्वाचन प्रणालीको कारण दुई ठूला पार्टी रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टी बाहेक अरु पार्टीका उम्मेद्वारले जित्ने कल्पना त्यहाँ कसैले गर्दैन । यसपालीको निर्वाचनमा पनि त्यही परिदृष्य दोहोरिने निश्चित जस्तै देखिन्छ । यद्यपि साना पार्टीहरुले पनि निर्वाचन अभियान भने जारी राखेका छन् ।
बिल क्लिन्टन, बाराक ओमाबाजस्ता प्रभावशाली युुवा राष्ट्रपति दिँदै आएको डेमोक्र्याटिक पार्टीले यसपटक ७७ वर्षीय जो वाइडनलाई उम्मेद्वार बनाएको छ । वाइडन खासै प्रभावशाली व्यक्तित्व भने मानिदैनन् । उन ओबामाको राष्ट्रपतीय कार्यकालका उपराष्ट्रपति हुन् । ट्रम्पका लागि यो राहतको बिषय हो ।
२०१६ को निर्वाचनमा पनि ट्रम्पलाई यसरी नै भाग्यले साथ दिएको ठान्ने धेरै छन् । त्यतिखेर हिलारी क्लिन्टन डेमोक्र्याटिक उम्मेद्वार थिइन । त्यतिखेर बर्नी स्यान्डर्सलाई सम्भावित डेमोक्र्याटिक उम्मेद्वारको रुपमा हेरिएको थियो । स्यान्डर्स उम्मेद्वार हुन्थे भने ट्रम्पले जित्दैनथे भन्ने विश्लेषण भएका थिए । प्राइमरमा अन्तिमसम्म प्रतिस्पर्धामा रहेका स्यान्डर्सको नामांकन यसपाली पनि डेमोक्र्याटिक कमिटीले स्वीकार गरेन । यसले स्यान्डर्सका युवा समर्थकहरु निराश भएको बताइन्छ । यो ट्रम्पका लागि अर्को ‘प्लस प्वाइन्ट’ हो ।
तर गत अगष्ट ११ मा ५६ वर्षीया कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपति जोडा छानेर वाइडनले आफ्नो कमजोरी पक्षलाई पुर्ताल गरेका छन् । साथै उनले यो पनि बताएका छन् कि उमेरको कारण दोस्रो कार्यकालका लागि उनी प्रतिस्पर्धी हुने छैनन् । कमै राष्ट्रपति उम्मेद्वारले दोस्रो कार्यकालबारे अगाडि नै यस्तो घोषणा गर्दछन् । यस्तो घोषणा गरेर वाइडनले भावी राष्ट्रपतिका लागि कमलालाई प्रोजेक्सन गर्न खोजेको बताइन्छ ।
कमलाको व्यक्तित्वमा केही सवालहरुको एकमुष्ठ समायोजन भएको छ । उनी भारतीय मूलकी आमा श्यामला गोपालनकी छोरी हुन् । एशियन आप्रवासी मतदातामा यसले आकर्षण सृजना गर्ने बताइन्छ । दोस्रो उनी जमैकन अश्वेत बुबा डोनाल्ड ह्यारिसकी छोरी पनि हुन् । बुबा पट्टीबाट उनी अफ्रिकी हुन् । अफ्रिकी तथा काला मतदाताहरुमा यस पक्षले आकर्षण सृजना गर्ने ठानिन्छ । तेस्रो उनी महिला हुन् । महिला उम्मेद्वारप्रति रुझान राख्ने मतदातमा यस पक्षको आकर्षण हुन सक्दछ ।
चौथो- उनी धेरै भोट भएको क्यालिफोर्निया राज्यकी हुन ।
पाँचौं– क्यालिफोर्निया महान्यायधिवक्ताका रुपमा उनको व्यक्तित्व एकदमै बोल्ड र छवी उदार लोकतान्त्रिक छ । उनको व्यक्तित्व र छविले मध्यम वर्गीय शहरिया लोकतन्त्रवादीहरुको भोट तान्न सक्ने ठानिएको छ । यदि आफूले जितेमा दोस्रो कार्यकालको लागि चुनाव नलड्ने वाइडनको घोषणासँगै उनलाई सम्भावित भावी महिला राष्ट्रपतिको रुपमा समेत हेरिएको छ । त्यसले उनको व्यक्तित्वलाई झनै चर्चित र आकर्षक बनाएको छ ।
अमेरिकाको इतिहासमा त्यस्ता धेरै राष्ट्रपति छन् जो उपराष्ट्रपति हुँदै राष्ट्रपति भएका थिए । थोमस जेफर्सन, थियोडोर रुजबेल्ट, ह्यारी ट्रुमेन, रिचार्ड निक्सनज, जर्ज बुसजस्ता चर्चित राष्ट्रपतिहरु राष्ट्रपति हुनु अघि उपराष्ट्रपति थिए । अहिलेका डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति उम्मेद्वार जो वाइडन बाराक ओबामा कार्यकालका उपराष्ट्रपति हुन् ।
अमेरिकाको इतिहासमा अहिलेसम्म महिला राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका छैनन । यो रेकर्ड समेत कमलाले बनाउँने हुन कि भन्ने आशा मानिसमा जागेको छ । आगामी नोबेम्बर ३ मा वाइडन र कमलाको जोडीले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ ।
तर वाइडन र कमलाका चुनौति भने अझ गहिरा छन् । कोविड–१९ सँगको संघर्ष, अर्थतन्त्रको पुृनरुत्थान, नयाँ विश्व सम्बन्धका आधार खडा गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास मतदातामा सृजना गर्न उनीहरुका मुख्य चुनौति हुन् । परिणाम के आउँछ त्यसका लागि अझै करिब ३ महिना पर्खिनै पर्छ । तर, वाइडन–कमलाको जोडीले चुनाव जितेमा चरम दक्षिणपन्थको विश्वव्यापी बहावविरुद्ध एक जबरजस्त छेकबार निर्माण हुने भने निश्चित छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनclose